Maxay kawada hadleen Rw Rooble iyo wasiiradda wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya? | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Maxay kawada hadleen Rw Rooble iyo wasiiradda wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya?
Maxay kawada hadleen Rw Rooble iyo wasiiradda wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya?
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta xafiikiisa kulan kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda Kenya Raychelle Omamo isla markaana waxay ka wadahadleen xoojinta xiriirka ka dhexeeyo labada dal.
Waxaana lagu wadaa Ra’iisul Wasaaraha in booqasho uu ku tego dalka Kenya kadib markii uu casuumaad uu ka helay madaxweynaha dalkaas.
“Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya ka guddoomay casuumad rasmi ah oo uu ka helay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyata” ayaa lagu yiri war saxaafadeed kasoo baxay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Previous articleEliud Kipchoge oo difaacday rikoorka Olimbikada
Next articleMaamulka NMS oo buufinaya goobaha dadweynaha